Semalt Expert Anowedzera paGmail Security - Anti-Scam Tips
Sezvo vashandisi vanoziva zvakajeka nzira dzinoshandiswa nehuwandu hwekutsvaga huwandu hwemashoko, avo vanonyangadza vanoramba vachigadzira mukugadzira munzira dzavo. Nzira itsva yekutora kutsvaga ndiyo iyo inotangisa mushandi weGmail kubva kumativi ose enyika. Nyanzvi dzezvokuchengetedza dzinonyevera kuti inogona kunge yakakosha zvikuru kune vanhu vanoshandisa Gmail - clone watches.
Kushandisa zvibvumirano zvakajeka zveGmail, ava vanonyengedza vari kushanyira vashandisi vasingazive mukunyanya kushandiswa kwezvikwata izvo zvinovaendesa kune mawebsite apo vanogona kuba mashoko avo.
Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji ( Semalt , anopa dzimwe nzira kuburikidza nevashandisi vanogona kuderedza dambudziko rekugumburwa nehupenzi hwakadaro. Izvi zvinotevera urongwa hwezvinhu zvaunoda kuziva.
Wordfence yakazarura ganda rekunyengedza kweGmail. Mune chimwe chezvikamu zvaro zveblogiti, yakanyora mashoko akajeka pamusoro pekuti izvi zvinonyadzisa sei. Nzira dzekutsvaga dzinotarisa Gmail majeti ayo vashandisi vane Google uye vanovatumira ma email akawanda kwazvo. Vanoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vaedze uye vashandise mushandi pakupa ruzivo rwavo. Pakati penzira dzakajairika dzinoshandiswa ndezvekubatanidzwa kwekubatanidza, kusungirirwa, kana kuzvivanza pachavo sekubatana kana kambani inozivikanwa kumushandi.
Pakutsvaga, chibvumirano chinodzokorora mushandisi kune peji rinenge rakafanana chaizvo newemaiti yeGmail uye rinokumbira kuti munhu aise mazita avo ekutumira imwe nguva imwe nguva kuti awane. Vashandisi vangave vasingazivi ndechokuti peji iyi itsva ichokwadi chekuvhura kwevanokuvadza apo vanokohwa mapiwedi nemakero e-email. Izvi zvichavapa kukwanisa kwakakwana kwenyaya yevashandi uye vadzivhare kunze. Nekutongesa zvakakwana kwekambani, ivo vanotumira iyo malware kuburikidza neemaimeri avo kuvanosangana navo pane iyo account. Nyanzvi dzekuchengetedza vanokurudzira vashandisi veIndaneti kuti vasashandise zvimwechetezvo logins uye passwords kune nzvimbo dzakawanda sezvo vangashandisa simba rekutsvaga kuwana mamwe masayiti ayo ari iye zvino ari nhengo.
Google inoona kuti nyaya yacho yakakosha uye inofunga nyaya yacho. Parizvino, kambani iri kutarisa nzira idzva dzavanokwanisa kusimbisa kudzivirirwa kwavo pamusoro pevashandisi veiyber vanoshandisa nzira dzakadaro.
Mukubvunzurudzwa nemumwe wevatsigiri veGoogle, vakapa mhando ye nzira kuburikidza nayo iyo vanobatsira kuchengetedza kusachengetedzwa kwevashandi kubva kuhupenzi hwekunyadzisa kune Express.co.uk. Pakati pavo paiva nekuchengetedzwa kwakachengeteka kucheneswa, kushandiswa kwemichina kushandiswa, kuchengetedza manyore ekugadzirisa account uye zvakawanda. Zvose izvi dzinoedza kudzivisa kupinda kusina mvumo kana kuona mazwi atove akaratidzwa se phishing scam. Panewo imwe nzira yekudzivirira inotendwa inoshandiswa nevashandisi kugadzirisa nzvimbo yavo yekudzivirira.
Kana munhu achidavira kuti kune mazano e-phishing emaikirwo mavo ebhokisi rekunyora, pane nzira dzavanogona kuita kuti kuderedza kuderedzwa kwe data. Pane peji repiri rekutsvaga rinowanikwa mushure mekutarisa pahubatanidza, kana ikaratidza nzvimbo yewebhu yakasiyana nezvinoonekwa nechepamutemo, saka hapana mubvunzo kuti yakanganisa. Chikonzero ndechekuti vanotya vanoshandisa "data URI" iyo inowanika kero yakarurama muzinda wakaipa. Kunyange zvakadaro, mukati-kati mavara machena apo vanovanza chibvumirano chavo chakaipa. Nzira chete iyo vashandisi vanogona kuramba vakachengeteka ndeyekuita chokwadi kuti hapana chinhu chinouya pamberi pemazita ezita kunze kwe "https: //."